Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » काठमाडौं उपत्यका उच्च जोखिममा, गल्ती कहाँ कहाँ ?
काठमाडौं उपत्यका उच्च जोखिममा, गल्ती कहाँ कहाँ ?
काठमाडौं, साउन १७ : मान्नुस्/नमान्नुस्– लकडाउन हटेपछि संघीय राजधानी काठमाडौं कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमतर्फ धकेलिँदै छ। विश्वव्यापी यो महामारी रोकिनसक्नु त छँदैछ तर नेपालमा झन्झन् कोरोना फैलिनुमा हाम्रा केही गल्ती कारक छन्। केही गल्ती सरकारका छन्, केही नागरिकका।
गल्ती २ : अटेरी नागरिक
साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट ।